Mogadishu : Alshabaab oo dilay sarkaal Kenyan ah oo ka tirsanaa
Home Somali News South and Central Mogadishu : Alshabaab oo dilay sarkaal Kenyan ah oo ka tirsanaa
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in Al-Shabaab ay dileen Mustafa Hassan Mohamed oo ka tirsanaa Al-Shabaab , islamarkaana kasoo jeeday dalka Kenya Shabaabna ku biiray sanadkii 2015 ta ka dib markii ka baxsaday Iskuul ku yaalla dalka Kenya.
Al-Shabaab ayaa Qaraxyo iyo Weeraro ay ka geysteen dalka waxa ay ku dileen Saraakiil badan oo ka tirsan Ciidamada Booliska dalka Kenya.
Falkaasi ayaa lagu soo waramaya in uu ka careysiiyay Kenyaan badan ee ka barbar dagaalama Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa horay u dilay dhowr nin oo Kenyaan ah , kuwaa soo ay ku eedeeyeen in ay ka tirsan yihiin Sirdoonka Kenya.
Maxay ku wadahadleen Farmaajo & Al Sisi
Mohamed - April 19, 2018
Xafiiska Madaxweynaha dalka Masar ayaa war kasoo saaray wadahadal dhanka taleefanka...
Safiirka Qatar oo warqadaha Aqoonsiga laga guddoomay
Dowladda oo u digtay Hay’addaha ka howlgalla Soomaaliya